यसपालिको चुनावमा मत बदर हुने जोखिम धेरै , भोट हाल्दा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् ! - nepal day
यसपालिको चुनावमा मत बदर हुने जोखिम धेरै , भोट हाल्दा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् !
प्रकासन मिति : २५ बैशाख २०७९, आईतवार ०३:२२
देशमा चुनावको रौनक बढे पनि कतिपय मतदातामा कसरी मतदान गर्ने अन्योल देखिएको छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने जोखिम छ । यसपटक एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता छन् ।
६० प्रतिशत मत खसे पनि पाँच प्रतिशत बदर हुनसक्ने आकलन निर्वाचन आयोगको छ । सरदरमा पाँच प्रतिशत मत बदर हुने आयोगको अनुभव रहेको सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
मतपत्रमा धेरै चिह्न भएकाले मतदाता अलमल हुने जोखिम उत्तिकै छ । पहिलो पटक मतदानमा भाग लिनेहरुलाई अझ धेरै अलमल छ । मत माग्न दलहरू घरघरमा पुगेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यसपालि घरदैलोमा पुगेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको छैन । यसपालि गठबन्धन गरेका दलहरुका साझा उम्मेदवार छन् ।
त्यसमा झुक्किन सक्ने अवस्था छ । चुनाव चिह्नको कोठाबाहिर स्वस्तिक छाप लगाए मत बदर हुन्छ ।दुईवटा चिह्नकोबीचमा छाप लगाए, औँठाछाप, नबुझिने गरी लतपल मत सङ्केत, मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र प्रयोग गरे पनि बदर हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका चुनावमा एक जना मतदाताले मतपत्रको सातवटा चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नुपर्छ ।
त्यसमा पहिलो ठाडो लहरमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमध्ये एउटामा, दोस्रो ठाडो लहरमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारको चिह्नहरूमध्ये एउटामा, तेस्रो ठाडो लहरमा वडाअध्यक्ष पदको उम्मेदवारको चिह्नमध्ये एउटा चिह्नमा, चौथो ठाडो लहरमा महिला सदस्य पदको उम्मेदवारको एउटा चिह्नमा, पाँचौँ ठाडो लहरमा दलित महिला सदस्य पदको उम्मेदवारको चिह्नमध्ये एउटा चिह्नमा मत दिनुपर्छ।
त्यस्तै छैटाैँ र साताैँ ठाडो लहरमा रहेका दुई सदस्य पदका उम्मेदवारको चुनाव चिह्नहरू मध्ये कुनै दुई चिह्नमा छुट्टा–छुट्टै छाप लगाइ मतदान गर्नुपर्छ । यसरी हरेक पदका लागि आफूले रोजेको सात जना उम्मेदवारको चिह्न रहेको कोठाभित्र पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाइ मत सङ्केत गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
मतपत्रमा मत सङ्केत गरेपछि मतपत्रलाई राम्ररी पट्याएर मत पेटिकामा खसाले बदर नहुने आयोगले जनाएको छ।